Wefdiga Madaxweynaha Somaliland Iyo Rasal Wasaare Ku xigeenka Turkiga, Qodobada Ay Isla Qaateen Labada Dhinaca Iyo Arrimaha Laga Hadlay | Araweelo News Network (Archive) -
Wefdiga Madaxweynaha Somaliland Iyo Rasal Wasaare Ku xigeenka Turkiga, Qodobada Ay Isla Qaateen Labada Dhinaca Iyo Arrimaha Laga Hadlay
Ankara (ANN)Raysal wasaare Ku xigeenka Turkiga Bekir Bozdag, ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay Weftiga Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) oo socdaal shaqo ku jooga dalkaa, sida lagu sheegay
war qoraal warbaahinta loo qaybiyay oo laga soo xigtay wasiirka arrimaha debeda Somaliland oo kulankaa kadib warbaainta la hadlay, waxay labada dhinac ee Somaliland iyo Xukuumadda Ankara ku faaqideen kulankaa qodobo la xidhiidha wax wada qabsiga labada xukuumaddood ee Somaliland iyo Turkiga.
Wasiirka Arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Somaliland Dr. Maxamed Cabdilaahi Cumar, ayaa kulankaasi ka dib saxaafadda uga waramay dulucda qodobadii lagu falan-qeeyay kulankii dhex maray Raysal Wasaare Ku xigeenka Turkiga iyo Weftigii Madaxweyne Siilaanyo.
“Arrimaha Raysal wasaare ku xigeenka Turkiga iyo Madaxweynaha Somaliland ay ka wada hadleen waxa ka mid ahaa, in kor loo qaado iskaashiga iyo xidhiidhka labada wadan, isla markaana kor loo qaado kaalmadda ay dawladda Turkigu siiso Somaliland,”ayuu yidhi Dr. Maxamed Cabdilaahi.
Wasiirku wuxuu intaasi ku daray “Waxa kale oo aad looga hadlay arrimaha labada dal iska kaashan doonaan waxa ugu horeeya dhinaca tacliinta, khaasatan dhinaca waxbarashadda farsamada gacanta iyo dhinaca caafimaadka oo aanu weydiisanay inay dawlada Turkigu ay cisbitaalo casri ah ka hirgeliso Somaliland.”
“Waxa kale oo kulankan la isla qaatay in diyaarada Turkish Airlines oo imika meelo ka mid ah Geeska Afrika timaada inay duulimaadyadeeda ku soo darto Hargeysa, iyadoo ay bilaabi doonto duulimaadkaasi marka Bisha lixaad ee sanadkan la dhamaystiro dayactirka iyo casriyaynta madaarka Hargeysa,”ayuu yidhi Wasiirka Arrimaha dibaddu, waxaanu isagoo hadalkiisa sii watay uu yidhi “Waxa kale oo horeba miiska u taalay booqasho aanu doonaynay in madaxda sare ee dalkaTurkigu ay ku timaado Somaliland, waxaanan rajaynaynaa inay booqashadani noqon doonto sanadkan 2013-ka gudihiisa.”
Dhinaca kalena, madaxweynaha Somaliland iyo weftigiisa waxa quraac sharaf ku soor-yeeyay Wasiirka Tamarta ee Turkiga.
Madaxweynaha Somaliland Md. Axmed Siilaanyo ayaa Wasiirka Tamarta ee Turkiga uga xog waramay khayraadka ku dihin ee dalka iyo sida ay xukuumadiisu u soo dhaweynayso maal-gashadeyaasha caalamiga ah.
Wasiirka Macdanta, biyaha iyo Tamarta Somaliland Mudane Xuseen Cabdi Ducaale (Xuseen Guray) ayaa saxaafada tafaasiil ka siiyay qodobadii Madaxweyne Siilaanyo u bandhigay Wasiirka Tamarta ee Turkiga.
“Waxa noo suurto-galay inaanu u bandhignay mashaariicda tamarta ah ee dalkeena ka socda,khaasatan shirkadda Genel Energy ee Turkish-ka ahi ka wado. Aad iyo aadna way ugu riyaaqeen hawshaasi,”ayuu yidhi Wasiirka Macdanta iyo biyaha Somaliland.
Wasiirka oo hadalkiisa sii watay wuxuu yidhi “Waxa kale oo aanu u soo bandhignay fursadaha maal-gashiga ee u banaan sharaa’iga Turkiga eek u hawlan mashaariicda koronto dhaliska oo dalkeenu daciif ku yahay. Markaa arrintaasna way soo dhaweeyeen oo waxay balan qaadeen inay sharaa’ig khaas ah oo qabta shaqada tamar dhalista ay dhakhso ugu soo diri doonaan Somaliland si ay u soo indho indheeyaan wadanka.”
Geesta kalena, Weftiga Madaxweynaha Somaliland waxay isla maanta kulan la yeesheen Masuuliyiinta Ha’yadda horumarinta u qaabilsan Turkiga, waxaanay ka wada hadleen dhinacyada horumarinta waxbarashadda, wadooyinka iyo kaabeyaasha dhaqaalaha Somaliland.
Madaxweyne Siilaanyo iyo weftigiisu waxa kale u qorshaysan inay la kulmaan Raysal wasaaraha Turkiga Rajab Tayyib Ordugan oo isagu marti-qaad rasmi ah u fidiyay Madaxweynaha Somaliland iyo Weftigiisa.
Waxa kale oo madaxweynaha iyo weftigiisa ka soo galbiyay Gaadiidka khaaska u ah wufuuda caalamiga ah ee dalkaasi booqashada ku yimaadda.
Weftiga Madaxweynaha ee socdaalka ku jooga dalka Turkiga waxa ku weheliya Wasiirrada wasaaradaha Arrimaha dibadda, madaxtooyadda, macdanta iyo Biyaha, waxbarashadda, dib u dejinta, Safiirka Somaliland ee dalka Itoobiya iyo Marwadda koowaad ee Somaliland.